Kujekesa Mumiriri, Nyukireya Mumiriri Wekuwedzera Rigidity - BGT
Tianjin Yakanyanya Kuwana Sayenzi & Technology Co., Ltd. (China BGT) inzvimbo yeindasitiri uye yezvokutengeserana iri kuita mukugadzira nekuburitsa michina yemakemikari yepamusoro. China BGT yakagadzwa mugore ra2000. Zvigadzirwa zvikuru ndezvekujekesa mumiririri, imwe inomiririra uye zvinowedzera zvekudzokorora mapurasitiki ayo akatumirwa kunyika zhinji dzeSouth East Asia, Middle East neEurope kweanoda kusvika makore makumi maviri aine zvakanaka. uye yakatsiga mhando.
tarisa zvimwe Taura nesu
yedu nyaya yekudzidza inoratidza
Kujekesa mumiririri kunogona kushandiswa mukusimudzira kujekesa uye kuwedzera kupisa kupisa kwe polypropylene kuburikidza neiyo nucleation yeiyo polymer. Izvi zvakare zvinotungamira mukusimudzira kuomarara kwechikamu chakaumbwa uye kupfupisa kutenderera nguva panguva yekuumbwa. Rudzi urwu rwezvigadzirwa zvemafomura akadaro zvakagamuchirwa neDFA inobvumidzwa kushandiswa mukudyidzana kwechikafu mumusika wepasi rose.
Nekushandisa Nucleating Agent, akawanda maitiro echigadzirwa anogona kuvandudzwa, kusanganisira iyo yakasimba yezvinhu, kuburitsa simba mukukakavadzana, simba remhedzisiro, flexural modulus, tembiricha yekudziya kushatisa, kugadzikana. Izvo zvakare zvinogona pachena kuvandudza opareta uye mehendi zvesimba zvezvigadzirwa. Iyo isiri-chepfu chena hupfu neisina-hwema.
Transparent Master Batch inokodzera isina kukwana kristaro resini yePP & PE nezvimwewo.Izvo zvinogona kusimudzira zvigadzirwa 'kujekesa uye kupenya kwepasirese, tensile simba, kuomarara, kupisa kwekukanganisa tembiricha uye kukura kwehukuru, kudzora kuumba kutenderera. Inonyanya kushandiswa mukushandurwa kwePP zvigadzirwa zvepurasitiki-jekiseni uye kugadzirwa kwePP, PE mwenje mwenje wekutepfenyura mutete firimu, semuenzaniso chikafu, zvigadzirwa zvekutakura zvinhu, mudziyo wezvokurapa nezvimwe.
Zvigadzirwa zvedu zvakatumirwa kune dzimwe nyika muSoutheast Asia, Middle East neEurope.
Zvigadzirwa zveBGT zvigadzirwa zvepamusoro-soro, zvine tsananguro yepamusoro, isina-chepfu, isina hunhu.
Pese patinenge tine mahunyanzvi ehunyanzvi ekupindura mibvunzo yako.
Zvigadzirwa zvedu zvinoshandiswa zvakanyanya Redu ruzivo